» ‘के हेटौँडाबाट राजधानी सर्छ ?’ यस्तो आयो मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट विज्ञप्ति
‘के हेटौँडाबाट राजधानी सर्छ ?’ यस्तो आयो मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट विज्ञप्ति
१६ असार २०७६, सोमबार १३:२२
मकवानपुर, १६ असार । प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानीका रुपमा रहेको हेटौँडालाई स्थायी बनाउने वा नबनाउने विषय झनै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । केही समयअघिसम्म राजधानी हेटौँडामा नै हुने लगभग निश्चित भएको भन्दै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले खुशियाली मनाएका थिए । तर राजधानीका विषयमा नबोलेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको भन्दै सोमबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको स्वकीय सचिवालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ–‘प्रस्तुत बिषयमा मिति २०७६ साल असार १५ गते विभिन्न सञ्चार माध्यममा ३ नम्बर प्रदेशका माननिय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ज्यू र माननिय सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ ज्युलाई जोडेर ‘‘मुख्यमन्त्री र सभामुखको एउटै स्वरः हेटौंडा नै स्थायी राजधानी’’ शिर्षकको समाचारप्रति स्वकिय सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा प्रकाशित बिषयबस्तुको बारेमा सो समयमा कोहि सञ्चारकर्मीसँग भेट वा अन्य कुनै कार्यक्रममा समेत सहभगी नभएको जानकारी गराईन्छ । तसर्थ राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रले यस्ता भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन जाने भएकोले सत्यतथ्य जानकारी लिएर मात्र समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरीदिनु हुन सञ्चार जगतलाई अनुरोध छ ।’ हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति–
जब हामी कसैलाई आफुलाई भन्दा बढी माया गर्छौँ, तब उसका लागि हामी सबै कुरा त्याग गर्न पनि तयार हुन्छौँ । आफुले माया गर्ने मान्छेका लागि परिवार, आफन्त अनि परिआए संसार नै छोड्न पनि सक्छौँ जस्तो हामीलाई आभाष हुन्छ । संसारका सबै थोक फिका लाग्छन् मायामा । अनि बस् आफुलाई माया गर्ने मान्छे र माया नै हाम्रो लागि जीवनको एउटै मात्र लक्ष्य हो जस्तो हामीलाई लाग्छ । त्यसैले कहिलेकाँही मान्छेले मायामा धोका पाएपछि संसारबाटै बिदा हुने निर्णय गर्छ । उसले आफ्नो पिडामा आमाबुवाको पिडालाई चटक्कै बिर्सन्छ । आफ्नो जीम्मेवारी सबै भुल्छ । श्रृष्टिकर्ताले दिएको अमुल्य जीवनलाई अन्त्य गर्न ऊ कि डोरी लिएर फाँसीमा चढ्छ कि विष सेवन गरेर छट्पटाउँछ । किन कि उसले आफ्नो अगाडि बढ्ने सबै बाटोको अन्त्य भएको देख्छ । तर वास्तविकता त्यो होईन । किन कि जहाँ एउटा बाटोको अन्त्य हुन्छ त्यहाँबाट फेरि अर्को बाटोको सुरुवात हुन्छ ।
हामी स्वभावैले आफुले माया गरेको मान्छेबाट छुट्टिन चाहाँदैनौँ, आफुले माया गरेको मान्छेबाट धोका खान चाहाँदैनौँ । त्यसका लागि हामी हाम्रो आफ्नो मान्छेलाई मनपर्ने र मन नपर्ने हरेक कुराको ख्याल गर्छौँ । सकेसम्म आफ्नो प्रेमीलाई मन नपर्ने कुरा उनको सामु गर्दै गर्दैनौँ । उसलाई के मनपर्छ के मनपर्दैन ? उसले के खान्छ के खाँदैन ? उसको फेवरेट रङ कुन हो ? कुन रङ उसलाई मन पर्दैन ? उसको रुचि के हो ? यस्तै कुराहरु हामी एकएक ध्यानमा राख्छौँ । तर यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाँही मायामा हामीले धोका पाउँछौँ । धोका दिन्छु भनेर गलत सोचाई नै राखेर मात्र प्रेममा धोका हुँदैन कहिलेकाँही एकअर्कालाई माया गर्दा गर्दै पनि हामीले एकअर्कालाई धोका दिएर छुट्टिएका घटनाहरु आज धेरै युवा जमातले भोगिरहेका छौँ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? किन पहिले निकै माया गर्ने लाग्ने मान्छे पछि नराम्रो लाग्न थाल्छ ? किन सुरुमा फुल झैँ सुकोमल लाग्ने उनको मायाले पछि आफैलाई घोचेको महशुस हुन्छ ? यस्तै प्रश्न कहिलेकाँही हाम्रो मनमा आउँछ ।
वास्तवमा हामी हाम्रो मान्छेलाई संसारकै सुख दिन चाहान्छौँ, कहिले पनि उनको मन नदुखोस् भन्ने चाहान्छौँ तर भइदिन्छ उल्टो । यस्तो किन हुन्छ ? यसका अनेकौँ जवाफहरुमध्ये एउटा जवाफ हो–माया र ओभर केयरिङ बिचको फरक छुटाउन नसक्नु । हेरौँ भिडियो–
मायालाई टाईम पास सोच्नेहरुका लागि यो कुराको कुनै अर्थ रहँदैन तर साँचो माया गर्नेहरुका लागि भने यो कुराको निकै महत्व हुन्छ । हामी माया गर्ने नाममा कतिखेर ओभर केयरिङ गर्छौँ हामीलाई थाहै नहुन सक्छ । हामीले कसैलाई माया गरिरहँदा अथवा जे सुकै कुरामा पनि होस्, हाम्रो आफ्नो निश्चित सिमारेखा पार गर्न नहुने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । हामीले गरेको माया ओभर केयरिङमा परिणत भयो भने हाम्रो प्रेमी वा प्रेमिकाले इरिटेट महशुस गर्न थाल्छ । उसलाई चिटचिट हुन्छ, आफु बन्धनमा परेको महशुस गर्न थाल्छ, आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाले दिएको साँचो मायालाई पनि उसले बोझका रुपमा महशुस गर्न थाल्छ । त्यसैले केही साँचो प्रेमका कथाहरु पनि अकल्पनीय बिन्दुमा गएर अन्त्य हुन्छ । हामीले यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन कि हरेक मान्छे स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहान्छ । त्यो स्वतन्त्रता मायाले पनि खोस्न सक्दैन । मैले यहाँ छाडा स्वतन्त्रताको कुरा गरेको होईन, वफादारी र प्रेमभित्र पनि नियममा बाँधिएको स्वतन्त्रता हुन्छ जसलाई हरेकले बुझ्नु जरुरी छ । जुनसुकै बेला फोनमा झुण्डिने, जुनसुकै बेला एसएमएसमा झुण्डिने, च्याट गर्ने, जतिखेर पनि बोलिरहने, आफ्नो प्रेमि वा प्रेमिकाको सामाजिक अवस्थालाई नबुझी साँचो प्रेमी देखाउन मरितुल्य गर्ने बानीहरुले गर्दा साँचो माया गर्नेलाई पनि चिटचिटाहट महशुस हुन्छ । हामीले हाम्रो मान्छेले सहन सक्ने जति मात्र माया दिन सक्नुपर्छ । उसको लागि रिचार्जदेखि बुलेटसम्म किनिदिने, उसले के खाने के नखाने डिसाईड गरिदिने, उसले के पहिरन लाउने वा के नलाउने भन्ने कुरालाई हामीले नै निक्र्यौल गरिदिने, उ कहाँ को सँग छ भन्ने जस्ता कुरालाई लिएर किचकिच गरिरहने बानीले हामीलाई थाहै नपाई आफ्नो मान्छेबाट टाढा बनाईरहेको हुन्छ ।
त्यसैले हामीले एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । हुन त आजको समयमा विवाह अघिको प्रेमलाई मर्यादित बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान कमै जान्छ तर एउटा नैतिक बन्धनमा बाँधिएर विवाहपछिको श्रीमान श्रीमतीको प्रेमलाई महत्व दिन सके यस्ता कुराहरुको जोखिमबाट हामी सुरिक्षत हुन सक्छौँ । तर यदि तपाई कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाई माया गर्दैहुनुहुन्छ वा ओभर केयरिङ ? त्यसको बारेमा सचेत हुनु जरुरी छ । मायाको एउटा सिमा कोरेर त्यही अनुसार जीवनमा अघि बढ्न सके हामीले प्रेमलाई त्याग गर्नुपर्ने दिन नआउन सक्छ । आसा गरौँ हरेक प्रेमिल जोडीको प्रेम सफल होस्, एकअर्काको जीवनसाथी बनेर एकअर्कालाई बुझेर अघि बढ्न सकियोस् । एकलाई चोट पर्दा त्यसमो पिडा उसको आफ्नो मान्छेले पनि आभाष गर्न सकोस् । प्रेम आफैमा एउटा यस्तो माध्यम बनोस् जसले हरेक चुँडिएका मनहरुलाई जोड्न सकोस्, हरेक रोएका मुहारलाई मुस्कुराउन सफल हुन सकोस् अनि एउटा मनको आभाषलाई अर्को मनको तारसम्म जोड्न सकोस्, जसले पुराउन सकोस् हरेक मनका आभाषहरु उसको हकदारको मुटुसम्म । मुटुदेखि मुटुसम्म ।
मिस तामाङको फाईनलमा यसरी भयो झडप (भिडियो)
मिस तामाङ २०१९ विवादमा तानिएको छ । मिस तामाङको ताजका लागि पैसा लिएको र धाँधली भएको भन्दै सहभागीहरुले नै आयोजक विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । हेरौँ भिडियो–
आँचललाई पलको प्रस्ताव–‘जाउँ मसँग भागेर’ (भिडियो)
चर्चित अनस्क्रिन जोडी नायक पल शाह र आँचल शर्मा, नयाँ भिडियोहरुमा पूनः सँगै देखिन थालेका छन् । केहि दिन अघिमात्रै पनि उनीहरुको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा पलले आँचललाई भागेर जान आग्रह गर्छन् । आँप जोडीका रुपमा परिचित पल र आँचलको अनस्क्रिन जोडीलाई रियल लाईफमै जोडी देख्न चाहाने उनका फ्यानहरुका लागि यो भिडियो अझ रोमाञ्चक हुनसक्छ । भिडियोमा आँचल र पल सँगै डेटिङ जान्छन्, बाईकमा यात्रा गर्छन् अनि पलले आँचललाई बोकेर हिँड्छन् । यो दृश्यले रोमाञ्चक अनुभूति दिएकै बेला उनीहरुको अर्को एउटा रोमान्टिक दृश्य पनि गीतको भिडियोमा छ । त्यसका लागि भने तपाईले म्यूजिक भिडियो नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओ.एस.आर. डिजिटल मार्फत सार्वजनिक गरिएको ‘जाउँ हिँड’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियोलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा नै १ लाख ९५ हजार पटक हेरिसकिएको छ । गीतमा करिब ७ हजार लाईक र करिब ७ वटा कमेन्टहरु गरिएका छन् । पल र आँचलको फिचरिङ गरिएको यो गीतमा बिकु क्षेत्रीको आवाज सुन्न सकिन्छ । प्रस्तुत गीत ‘छुटिएर’ एल्बममा समावेश छ । रबिन विष्टको शब्द तथा डम्बर खपुङको संगीतमा संगीतबद्ध गीतलाई उदयराज पौडेलले एरेञ्ज गरेका हुन् । नवराज उप्रेतीको छायाँकन तथा नविन निरौलाको सम्पादन रहेको भिडियोमा सुबोल थापाले कोरियोग्राफी गरेका छन् । गम्भिर विष्टको निर्देशनमा बनेको म्यूजिक भिडियोलाई पदम चुवानले निर्माण गरेका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
ब्वाईफ्रेण्ड बारे गायिका विद्या तिवारी गोप्य कुरा
नेपाल आईडलको पहिलो सिजन र द भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा सहभागिता भएसँगै थप चर्चामा आएकी गायिका विद्या तिवारीले ब्वाईफ्रेण्डबारे नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । हिट हेटौँडा च्यानलमा मकवापुरे सञ्चारकर्मी मणिराज गौतमसँग कुराकानी गर्दै उनले आफु अझै सिंगल नै रहेको बताएकी हुन् ।
विवाहका लागि माग्न आएका ईन्जिनियरदेखि डाक्टरसम्मलाई छनौट नगरेकी उनलाई म्यासेजमै समेत प्रपोज गर्नेहरुको निकै ठूलो जमात रहेको खुलेको छ । नेपाल आईडलमा उत्कृष्ट १८ र द भ्वाईस अफ नेपालमा उत्कृष्ट ८ सम्म पुगेकी उनी पछिल्लो समय ‘घाममा सुकाईदेउ’, पिच रोड लगायतका चर्चित गीतहरुबाट थप चर्चामा छिन् ।
साँगितिक परिवारमा हुर्किएकी विद्याले पहिले अग्रजहरुको कभर गीत गाउँदै सांगितिक क्षेत्रमा जमेकी उनलाई अहिले श्रोताहरुले आफ्नो गीतहरुलाई टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा कभर गर्दा निकै खुशी लागेको बताईन् । हेटौँडाको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान संकाय अध्ययन गरेकी उनले कुनै बेला साँगितिक क्षेत्रमा प्रोफेस्नली लाग्ने कुनै योजना नभएता पनि आईडल र द भ्वाईसले आफुलाई नयाँ गन्तव्य दिएको बताईन् ।
सुन्दर ५ तस्बिरमा वर्षा थिङ तामाङ ! (फोटो फिचर)
नेपाली तथा तामाङ गीतहरुमा मोडलिङ गर्दै नायिकाको यात्रा समेत तय गरेकी नायिका वर्षा थिङ तामाङ कला क्षेत्रमा परिचित नाम हो । उनै वर्षाले सुटिङका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका केही तस्बिरहरुमा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छिन् ।